Sina Ny maha-zava-dehibe ny mari-pana sy ny hamandoana amin'ny mpamokatra sy mpamatsy fiompiana akoho. HENGKO
Sintered Porous Metal sivana
Ny sivana stainless vy
Disc vy sivana vy
Tube Stainless vy
Plate misy vy matevina
Saribao fanilo vy matevina
Sivana vita amin'ny metaly Powder
Ny vovoka vita amin'ny menaka manitra vita amin'ny vovoka
Sivana varahina voaova
Stainless Steel harato Filter
Mpandefa Sensor Dew Point Sensor
Hafanana Humidity Sensor
Vatosokan'ny karbônina diffuser
Beer Oksizenina Carbonation Stone
Vatosaky ny rivotra Air Bubble diffuser
Trano fonenan'i Sensor Sensor
Fivoriam-be mpamatsy solika
Fivoriambe mpandefa solika
Vahaolana IOT sensor ho an'ny Humidity
Ny maha-zava-dehibe ny mari-pana sy ny hamandoana amin'ny fiompiana akoho
Ho avy ny ririnina, ny avaratra sy ny atsimo dia niditra tamin'ny vanim-potoana mangatsiaka, tsy ny olona ihany no nangatsiaka, ny akoho dia "hangatsiaka". Ny mari-pana dia iray amin'ireo zava-dehibe izay afaka manatsara ny tahan'ny fahavelomany sy ny taham-penin'akoho ao amin'ny fiompiana akoho, fantatsika rehetra fa amin'ny mari-pana tontolo iainana marina no ahafahan'ny atody maniry ary tonga foy amin'ny akoho. Ary mandritra ny fiompiana zana-borona, dia ambany loatra ny mari-pana, mora zakaina ny zana-borona ary miteraka fivalanana na aretin'ny taovam-pisefoana, ary hiangona miaraka ireo zana-borona mba hanafana hatrany, misy fiatraikany amin'ny sakafo sy hetsika. Noho izany, ny fiompiana akoho dia tsy maintsy mijery ny fifehezana ny mari-pana.
Fanaraha-maso sy fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny tranon'akoho:
Ny mari-pana tamin'ny andro voalohany ka hatramin'ny faharoa dia 35 ℃ ka hatramin'ny 34 ℃ tao anaty incubator ary 25 ℃ hatramin'ny 24 ℃ tao amin'ny fiompiana akoho.
Ny mari-pana amin'ny incubator manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 7 andro dia 34 ℃ hatramin'ny 31 ℃, ary ny fiompiana akoho dia 24 ℃ hatramin'ny 22 ℃.
Tamin'ny herinandro faharoa dia 31 ℃ ~ 29 ℃ ny mari-pana nampidirina anaty rano, ary 22 ℃ ~ 21 ℃ ny maripanan'ny fiompiana akoho.
Tamin'ny herinandro fahatelo dia 29 ℃ ~ 27 ℃ ny mari-pana nampidirana rano, ary 21 ℃ ~ 19 ℃ ny maripanan'ny fiompiana akoho.
Tamin'ny herinandro fahefatra dia 27 ℃ ~ 25 ℃ ny maripanan'ny mpampiditra, ary 19 19 ~ 18 ℃ ny fiompiana akoho.
Ny hafanan'ny fitomboan'ny akoho dia tokony hitandrina tsara, tsy afaka miovaova eo anelanelan'ny avo sy ambany, hisy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny akoho.
Ny hamandoana ao amin'ny tranon'akoho dia avy amin'ny etona rano ateraky ny fisefoan'ny zana-borona, ny fiantraikan'ny hamandoan'ny rivotra amin'ireo zana-borona dia atambatra amin'ny hafanana. Amin'ny maripana marina, ny hamandoana avo dia kely ny fiatraikany amin'ny fifehezana ny hafanan'ny vatan'akoho. Na izany aza, rehefa somary avo ny maripana, ny vatan'akoho dia miantehitra amin'ny fanaparitahana hafanana miakatra, ary ny hamandoan'ny rivotra dia manakana ny fiparitahan'ny hafanana miakatra avy amin'ny akoho, ary ny hafanan'ny vatana dia mora miangona ao anaty vatana, ary mahatonga ny fiakaran'ny maripanan'ny vatana, misy fiatraikany amin'ny fitomboana sy ny fahombiazan'ny atody amin'ny atody. Inoana amin'ny ankapobeny fa 40% -72% no hamandoana mifanaraka amin'ny akoho. Ny mari-pana ambony fetin'ny akoho amam-borona dia nihena niaraka tamin'ny fitomboan'ny hamandoana. Ireto ny tahirin-kevitra: ny mari-pana 28 ℃, RH 75% mari-pana 31 ℃, RH 50% mari-pana 33 ℃, RH 30%.
Afaka mampiasa mari-pana momba ny mari-pana sy ny hamandoana isika mba hahitana ny angona momba ny mari-pana sy ny hamandoana ao amin'ny tranon'akoho, raha avo loatra na ambany loatra ny mari-pana sy ny hamandoana, mety ho antsika ny mandray fepetra ara-potoana, toy ny fanokafana ny fantsona ho an'ny rivotra ary mangatsiaka na mandray fepetra ara-potoana mba hafana hatrany. Ny vokatra Hengko HENGKO® hafanana sy hamandoana vokatra azo avy amin'ny serivisy dia natao manokana ho an'ny fanaraha-maso ny mari-pana sy ny hamandoana amin'ny tontolo masiaka. Ny fampiharana mahazatra dia misy ny tontolo iainana milamina, ny fanamainana, ny fivoaran'ny rivotra (HVAC), ny fiompiana fiompiana, ny trano fonenana, ny dobo filomanosana anaty trano ary ny fampiharana ivelany. Fonenana fanadihadiana momba ny sensor, ny fahaizan'ny rivotra mivaingana, ny gazy sy ny hamandoana haingana, ny hafainganam-pandehan'ny fifanakalozana haingana. Ny trano dia manakana ny rano tsy hiditra ao amin'ny vatan'ny sensor ary manimba ny sensor, fa mamela ny rivotra hamakivaky ny tanjona handrefesana ny hamandoana (hamandoana). Halavam-bary boribory: 0.2um-120um, vovoka sivana, effet interception tsara, fahombiazan'ny filtration avo. Pore ​​habe, tahan'ny mikoriana azo namboarina mifanaraka amin'ny filàna; rafitra tsy miovaova, fifamatorana kitrana matevina, tsy misy fifindra-monina, saika tsy azo sarahina amin'ny tontolo iainana masiaka.
Raha manontany momba ny vokatra na ny lisitry ny vidiny, azafady avelao anay ny mailakao ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.
© Copyright - 2001-3030: HENGKO.com Zo rehetra voatokana. Hot Products - Sitemap - DIEM Mobile
Porous Metal , Ny sivana stainless vy, Humidity Sensor , Filter sintered , Gas Detector Housing , Sparger